Ungaqala Kuphi Ukuqalisa? | Martech Zone
NgoLwesibili, ngoFebhuwari 24, i-2009 NgoLwesibili, Okthoba 7, 2014 Douglas Karr
Kunezinzuzo ezithile ezinhle zokuqala inkampani e-Indiana. Ubuholi bosomabhizinisi buyinethiwekhi eqinile yabantu abathembekile futhi efakazelwe. Ngikhulume nge-Indiana ne-Indianapolis njengendawo ephambili yenkampani ukuqala ibhizinisi. Abantu bafundile futhi basebenza kanzima. I-real estate isengenye yezimakethe ezizinzile kakhulu ezweni lonke.
Ukube bengizoqala ibhizinisi, i-Indianapolis yindawo engifuna ukuba kuyo! Izakhiwo ezithengiswayo azibizi futhi uhulumeni nohulumeni basekhaya bobabili bangamabhizinisi aphambili.
Ingabe lokho kwanele ukuqala ibhizinisi, noma kunjalo?
Ukuqala ibhizinisi kudinga imali. Ngabe i-Indiana inayo?
The Isikhwama Se-21st Century igxile emabhizinisini akhombisile ukuthi kungenzeka amathuba emakethe wokuhweba ngobuchwepheshe obusha.
Abanye abagxeki bathi, yize isoftware nobuchwepheshe kubonakala kukukhula kakhulu emisebenzini, ukuthi i-bio-technology iheha ukuxhaswa kakhulu. Isizathu esisodwa kungaba ukuxhumana kwendawo i-bio-tech enakho ohlelweni lweYunivesithi. Ngiyethemba ukuthi akunjalo - ngithemba ukuthi le mali izoya emibonweni ngethuba elikhulu kakhulu.
Ngaphandle kweSikhwama se-21st Century, azikho izinketho eziningi. Imali yangasese inenzuzo ngaphezu kwemali ye-Venture Capitalist ngoba ngokuvamile iza nezintambo ezimbalwa ezinamathiselwe. Kodwa-ke, izimali ezizimele ziyaqhubeka ukungena kosomabhizinisi bendawo abaxhase ezinye iziqalo… futhi baxhasa imali… futhi baxhaswa ngezimali… futhi baxhaswa. Kuzwakala sengathi wonke umuntu uqhubeka nokubuyela kokufanayo kaninginingi.
Izwe lase-Indiana linezigidigidi ezi-2. Umngani wabelane nami namuhla ukuthi i-Orange County, eCalifornia inezigidigidi eziyi-8 ezibiza ngaphezu kwama-dollar ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-28. Lowo umehluko omkhulu impela, futhi ngokuqinisekile kuthinta ikhono leziqalo zendawo ukuthola uxhaso.
Ngakho-ke - umbuzo akuhlali njalo ukuthi iyiphi indawo engcono yokuqala ukuqala. Umbuzo ungahle ube lapho ikhona imali yokuxhasa ukuqala kwakho! Kungaba yisikhathi sokutshala imali eningi esikhwameni se-21st Century uma ufisa ukugcina ukugcina ezamabhizinisi ziphila lapha endaweni!
Abagibeli Bamahhashi Abane Bokuqalisa
Esinye isisetshenziswa esihle yi-Emerging Innovations Fund evela ku-Purdue.
IMat Business Marketing
Uthe kungcono kakhulu uDouglas. Iya lapho imali ikhona. Kokuqalisa okuningi imali yilapho abatshalizimali bakho abangahle babe khona.
Uma uqhuba inkampani ye-SaaS, kungenzeka ukuthi uthole imali eSilicon Valley, eBoston, e-Austin noma eBoulder.
Uma usebenzisa ukuqalisa amandla elanga, mhlawumbe iPhoenix kungaba yindawo enhle ongaba kuyo.
Uma ususebenza futhi unamakhasimende akhokhelayo, lapho-ke kungadingeka ukuvula ihhovisi lendawo lapho kukhona khona amaklayenti akho. Ngicabanga ukuthi iWal Mart idinga ukuthi abahlinzeki bayo babe nehhovisi lesifunda eduze kwendlunkulu yabo.
Mar 1, 2009 ku-3: 03 AM
I-Indiana ikhuluma ngesifiso sayo sokuba yindawo yokuqala ubungani. Kepha izenzo azikusekeli lokhu. Isikhwama se-21st Century siyisiqeshana esincane futhi siyisiqalo esihle. Kodwa-ke, ezinye izinsizakusebenza ezinjengezimali zokuzibandakanya, ubuholi obuphezulu, njll. Ngiyethemba izinto zizoshintsha, kepha i-Indiana ibukeka iyindlela ebukekayo kakhulu ukuba nebhizinisi okwamanje. Mhlawumbe amasondo ayahamba ukushintsha lokhu.
Mar 9, 2009 ku-10: 21 PM
Kunabantu abaningi esifundazweni sase-Indiana abanentshisekelo ekuqaleni kweSolar. Ngizama ukuxegisa ophathina bami ukuze ngiqale imikhiqizo yelanga. UKim koch